Isevisi - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Iningi lamaphepha okuhlunga enziwe ngefayibha yengilazi evela eMelika HV Company. Futhi sinobudlelwano bokubambisana obunobungane neNkampani ye-HV iminyaka. I-Korean AHLSTROM Company nayo inguzakwethu. Iphepha layo lefayela livumela impilo ende yesevisi yomkhiqizo wethu. Ngesikhathi sokubambisana, abasebenzisi abaningi ngemuva kokusebenzisa lolu hlobo lwesihlungi bazofaka i-oda eliphindayo.
“Okwamanje, inkampani yethu isisungule ubudlelwano bokusebenzisana nozakwethu abavela emazweni afana ne-USA, Thailand, Pakistan, Jordan, Malaysia, Iran, njll. Iningi lama-ejenti wethu wemikhiqizo anenethiwekhi yokuthengisa enamandla, ezuzisa umkhiqizo wethu. ukukhangisa. Ngesikhathi sokubambisana namakhasimende aphesheya kwezilwandle, amandla ethu okukhiqiza anamandla angakwazi ukuhlela izimpahla ngesikhathi esifanele ama-oda amakhulu ekhasimende. Zonke izimpahla zenziwe ngezinto ezingavuthiwe ezingeniswa zivela eMelika noma eKorea. Inkampani yethu ihlolwe kakhulu ngabasebenzisi abaningi, ngenxa yekhwalithi ephezulu, umklamo oyingqayizivele, nokuthuthwa okusheshayo kwemikhiqizo yethu.
Izinqubomgomo ezithandwayo zizonikezwa i-oda lokuqala. Singanikeza iklayenti elisha amasampula amahhala, kodwa kufanele lithwale izindleko zokuhamba. Kuma-ejenti kuphela, sizothumela njalo abasebenzi bethu bezobuchwepheshe ukuze banikeze isiqondiso sobuchwepheshe. "